UDmitry Nagiyev: ubomi bomntu, intsapho, umfazi, unyana, umfanekiso. Umfazi kaDmitry Nagiyev u-Alisa Sher, uNatalie Kovalenko
Ubomi bomntu kaDmitry Nagiyev. Iifoto zabafazi, iintombi kunye nendodana
Umfanekiso wendoda enobunzima akayiyo kuphela kwisikrini. Umdlali we-talented serial, umbukeli weTV, umbonisi obalaseleyo, i-physicist oyintloko yelizwe kunye ne-bachelor yexesha elizeleyo-konke oku nguDmitry Nagiyev, obomi bakhe buqulethe kwiimbali zamangqina kunye neemfihlelo. Uzingelwa yi-paparazzi, iimpapasho eziluhlaza zizama ukuqokelela ulwazi ngabafazi kunye neentombi, kunye nabasetyhini abavela ku-5 ukuya ku-95 bayagubungela amehlo baze bahlekisele: "Oo, yintoni indoda!".
Iingcamango malunga nobomi bomntu kaDmitry Nagiyev
Akukho mdlali omnye waseRashiya onamava amaninzi amaninzi kunye namahemuhemu. Kwaye u-Dmitry Nagiyev's instagram uhlala kubalandeli babo bonke ubudala. Ukukhangela okungaqhelekanga (iingcambu ze-Iranian zizenza zizive), i-earring entle, indlebe ethandekayo, umfanekiso wesitayela, ubuso obulungele kakuhle kunye nomdlalo onomdlalo onamandla - ungathini na ukuhleba kunye neendlebe xa ungeke ufike eqinisweni. Umdlali we-actor ngokwakhe kunye nombonisi usoloko echaza ukuba i-cinema kunye nemidlalo yaseshashalazini yinto yesibili kuye, kwaye kwindawo yokuqala abafazi. Emva koko wongezelela, ukugxekisana nomnxibelelwano ngokubukeka kwakhe okumangalisayo: "Kodwa ubomi bomntu ngummandla osondeleyo."
Ngokuphathelele intsapho yakhe uDmitry Nagiyev akazange atshele. Kwiintlobo ezininzi zodliwano-ndlebe, ngokuzithoba waxela ukuba wayengatshatanga kwaye wayekhangela enye injongo eya kuye. Abafuna ukungafuni-nto baxhamla kwaye baxeliwe kuye iinveli kunye namadoda .... Omnye umdlali omhle, ngokuzifihla ngokucophelela ukuziphatha kwakhe ngesondo ngokungavumelaniyo - ezo zonke iimfihlelo.
Shock !!! Bangaphi amadoda ebomini kaMarina Alexandrova! Funda malunga nalo apha .
Kodwa ngokukhawuleza kwavela ukuba akukho konke. U-Alla A. Selishcheva owayengumnumatholi owaziwa yiSt. Petersburg wabhala incwadi ethi "Ndingumfazi kaDmitry Nagiyev." Ngaloo nto, wavula isigqubuthelo semfihlelo yobomi babucala bukaDmitry Nagiyev. Emva kokuba le ncwadi ipapashwe, wonke umntu waqala ukuthetha ngentsapho kumculi kunye nendodana. Kwaye ngeencwadana ezininzi ezisezantsi ...
UDmitry Nagiyev kunye no-Alisa Cher
Esi sibini sasihlala umtshato osemthethweni iminyaka eyi-18. Enyanisweni, iminyaka engama-6 edlulileyo abazange bahlale kunye: baqhekeza emva kokuba incwadi ipapashwe. Ukutyhilwa kweencwadi zeArt Cher kwakudinga ukutyhila i "i", kodwa kwavelisa amahlebezi kunye neentlebo. Ngokuphathelele intsapho yomdlali odumileyo waqala ukuthetha kwiphephandaba eliphuzi, iifoto zomfazi kaNagiyev zavela kwi-intanethi. UDmitry kwafuneka axelele wonke umntu ngonyana wakhe ...
UCyril wazalwa xa umdlali wayeneminyaka engama-21 kuphela. Ukuzalwa kwendodana yakhe yaba yinkalo enzima ebomini kuDmitry Nagiyev. Ukufunda kwiziko lezemidlalo ukususela ekuseni kuze kube sebusuku kunye ne-penny scholarship, ukwenza umsebenzi wokuhlwa ngokuhlwa ukunyusa intsapho, ukuzonwabisa ngokuhlwa ebusuku kwindlu yokuhlala yabazali bomfazi - ngakwesinye icala ukulala komntwana, kwincwadi enye, kunye neengcambu ezilindile. Emva koko u-Nagiyev wayengakaboni ngokugqithisileyo kunye nomntu ongenakukhuseleka. UAlice wenza njalo. Wadala umzekeliso kuye ngobuchule, waza wamphulaphula icebiso lakhe: waqhayisa imisipha yakhe waza wamemeza ngokumangalisayo. Ngentaba ngokwakhe ucebisa ...
Kwincwadi yakhe yomntu, uCher uchaze iinkcukacha zobomi bentsapho. Wayekhumbula iinjongo ezingapheliyo zika-Alice zomyeni wakhe, ukulindela ngonaphakade kweenxeba kwaye ... uthando alufihlekanga kwiminyaka kamva. Kodwa ...
Ukuthanda amabali, okwakubonwe kwimizuzu elinesibini, yinyani. Instagram UDmitry Nagieva wayengakabikho kule projekthi, kodwa wafunda malunga nazo zonke iintlanga ngaphandle kwezithombe. UDmitry wababiza ngokuthi "ubuhlobo", kwaye wacebisa umfazi wakhe ukuba athathele ingcamango. Oko wazama ukukwenza ngexesha. Kodwa kanye "into emnandi" yaba kakhulu kangangokuba umfazi wayefuna ukubhala ngabo.
Iinkcukacha zikaShokiruyuschie zobomi bomntu siqu kaValery Leontiev zifunde apha .
Incwadi ka-Alice Sher ishiya impembelelo kabini. Ngakolunye uhlangothi - impindezelo yowesifazane ongathandekiyo, onokuhlala naye kuphela ngenxa yonyana wakhe, kwelinye - intukuthelo ayengayibonakali kuluntu.
Umdlali weqela emva kokupapashwa kwencwadi yavuma ukuba bahlukane noAlice ngenxa yesizathu sokuthi: uthando luphelile, kwaye unyana ukhule. Indodana kaDmitri Nagieva ilandele iinyawo zikayise ngokuzibandakanya - yaba ngumdlali. I-Charisma, ukunyaniseka, ukuphikisana nokukhusekisa i-antics kaBawo Cyril uzama ukukopisha.
UDmitry Nagiyev noNatalia Kovalenko
Emva kokuqhawula umtshato ukubeka esweni impilo kaNagiyev yaba nzima nakakhulu. Kodwa ilizwe lizele iindlebe. UDmitry Nagiyev noNatalia Kovalenko bahlala emtshatweni ongafanelanga iminyaka engama-7. Kodwa into ebalulekileyo kukuba baqala ukuhlala ndawonye ngaphambi kokuqhawula u-Alice. Ngelo xesha, ekuhlaleni kobudlelwane noNatalika Kovalenko, i-Tsekalo no-Rost babonwa njengabahlobo abasondeleyo bomdlali. UDmitry ubiza uNataliya umfazi wakhe wesikhathi esizayo. Kodwa umtshato awuzange kwenzeke.
Nangona okokuqala, i-blonde ebuthakathaka yayifumana indlela eya entliziyweni yakhe: ijikelezwe ngononophelo kunye nokuqwalaselwa, ilandele ukubonakala kwayo kunye nezitya zokutya eziphekiweyo. Kodwa uDmitry waqhubeka ngokumthobela ngokumthobela "umlawuli wakhe." Kwaye awusayi kuba nomsindo: umncedisi onobubele uyona nto eyona nto eyona nto ibaluleke kakhulu yokukwazi ukuba ngumntu onobukrakra. Ngokutsho kwamahemuhemu, uDmitry Nagiyev noNatalia Kovalenko baye baxhomekeka nje ngomsebenzi.
UDmitry Nagiyev kunye no-Irina Temicheva
Umdlali kunye nomculi-phantse ubudala obufana nendodana ka-Nagieva, kodwa ke, ubizwa ngokuba ngumlingani omkhulu kunye nomculi. Yena ngokwakhe, esele esatshatile umlimi wakhe uBondaryuk, uthele ioli phezu komlilo, ebonisa nge Instagram umfanekiso kunye noDmitry. Kwaye iilwimi ezimbi zingashiyili eli bali kwaye ziqinisekise ukuba le nto idibana. Futhi ungakulibali ukukhankanya iminyaka emininzi uDmitry Nagiyev. Ngaba ngoku kuyamangalisa?
Sergei Lazarev - gay? Iifoto ezithandayo. Khangela uze ufunde apha .
Umfazi oyimfihlo kunye namaphupha
Umshicileli uphazamisa ngokunyanisekileyo amahemuhemu ngomtshato omtsha womdlali oneminyaka engama-48 kunye nokuzalwa kwonyana wakhe wesibini. Ibhinqa kummandla we-actor ayinanto yokwenza - kwaye zonke ezo zintatheli ziyazi malunga. Kwaye uNagiyev uyaqhubeka enenkani, uhlezi ngokumangalisa kwaye uqikelele ngento ekujoliswe kuyo. Yaye iphupha lomntwana ngaphambi kokuba abe nguyise. Ufana noDmitry Nagiyev ... Lo mntu uthanda ukujonga kwezinye iifestile zabantu, kodwa akazibonakalisi ngokwakhe. Imfihlelo yobomi bomntu kunye nobuchule bakhe, njengoFizruk bakhe, "kwiimvoya ezintathu zokubetha" abasetyhini besuka kwamanye amadoda, banika inzala engapheliyo kumculi.
Ubomi bukaDonald Trump kunye nobomi bakhe bomntu ngabafazi bakhe nabantwana. Iingxelo ezicacileyo malunga neRashiya nePutin
Ukhohlakele okanye uzenza: U-Alla Mikheeva kunye nobomi bakhe, ubomi bomntu, indoda kunye nabantwana (iifoto zangasese ezivela kwi-Instagram)
Ucinga ukuba ngubani osesithombeni? Ukuba uphoswa ngumntu, ngoko ufuna ukuwenza iingoma zakhe ziphakame
Isaladi yerayisi yasendle kunye nama-orang
Ukudweba ngoNyaka omtsha 2017 kwi-kindergarten, kwisikolo, kumncintiswano. Imidwebo yezingane zeCock neSanta Claus ngeepensile eziseli zazo
Indlela yokuqala ukudibanisa kwiinkonzo zeenaliti
Indlela yokumelana nokutya kunye nokugcina ubuhle
Iingoma zezingane malunga nesikolo, ootitshala nabaqondisi-ezintle, ezichaphazelayo kwaye ezihlekisayo
Umama uJeanne Friske waba ngumsolwa kwimeko yokuthunjwa kwezigidi ezingama-20 "Rusfond"
Iibhola ze-cheese kwii-cops chips
Intsimi ye-Flower yonke unyaka